श्रेणीकरण कारक र्यांक सहसंबंध २०१ 2013 खोज्नुहोस् Martech Zone
बिहीबार, जुन 27, 2013 बिहीबार, जुन 27, 2013 Douglas Karr
Highbridge हालसालै हस्ताक्षर गरिएको साथ सर्चमेट्रिक्स र अब हामी यहाँ उनीहरूको सुइटलाई सम्बद्धको रूपमा प्रमोट गर्दैछौं Martech Zone। मुख्य कारण यो हो कि तिनीहरू केहि हुन् एसईओ उपकरणहरू त्यो सामाजिक प्रभाव मा र अधिक परम्परागत एसईओ कारक को रूप मा रैंकिंग मा धेरै ध्यान केन्द्रित छ।
गुगल द्वारा राम्रोसँग राखिएको वेब पृष्ठहरू के समान छन् र तिनीहरूलाई निम्न श्रेणीगत पृष्ठहरूबाट कुन भिन्नता छ? खोजमेट्रिक्सले ,300,000००,००० यूआरएलहरू खोज्यो केही शीर्ष गुणहरूको उपस्थिति र विस्तारको लागि शीर्ष खोज परिणाम स्थितिहरूमा देखा पर्दछ। परिणामहरू यी गुणहरू (कारकहरू) कसरी गुगल स्तर निर्धारण (प्रयोग गरेर) सँग सम्बन्धित छ भन्ने सन्दर्भमा प्रदर्शित हुन्छ Spearman का रैंक सहसंबंध गुणांक).
यो रिपोर्ट दुबै व्यापक छ र डाटालाई गलत प्रस्तुत गर्दैन (सहकार्य बनाम कारण) धेरै व्यावसायिक खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन कम्पनीहरू र पेशेवरहरूले गर्छन्। हाम्रो लागि कुञ्जी टेकवे सामाजिक खोजीको साथ संयुक्त मानक खोज अभ्यासको प्रभाव हो ... वाह!
भाइरल गइरहेको अर्थशास्त्र
जुलाई,, २०१ at 12::2013। बिहान
राम्रो इन्फोग्राफिक। सामाजिक संकेतहरू र गुगल लेखकत्वहरू पनि SERP मा राम्रो स्थान प्राप्त गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो।